Connective tissue - Wikipedia
Connective tissue kan jedhamu kunii gossa qoqqodama tissue afuurenni kessa tokko dha, kan hafaan sadeen immo epithelial, muscle, fi nervous tissue. Tissuen hunda yokan bayeen qoqqodama kana jalatti argaman:
Fakkii fi qarqarsa isaan qaban.
Mesoderm irra dhufuu isaani, bayinaan.
Ammalaa tissue lubbu hin qabneen qabachuun bayyinaan bekkamu isaanin, wal-fakkatu.
Dhigaa, cartilage, fi Lafeen yeroo bayee connective tissue jedhamani bekkamu, garuu tissue birra qoqqodama kana kessatti argaman irra adda waan ta'aniif, maqaa "connective tissue proper" jedhamun sadeen kuni kan biraa irra gargari bafamu. Qoqqodama embryonic connective tissue kessattille garagarummati jiraa; fuula kana irratti qoqqodami kuni akka qoqqodama sadaffa fi qoqqodama kophat barrefame argama.
1.1 Connective tissue proper
1.2 Specialized connective tissues
1.3 Embryonic connective tissues
2 Gossa Fibersii
3 Rakoo (disorders) connective tissue
4 Staining of connective tissue
Connective tissue properEdit
Areolar (or loose) connective tissue kuni organotta fi epithelia bakka isaanitti akka ta'an gochuu, fi protein fibres gargara ofii kessa qaba, collagen fi elastinille wajiin. Inflammation kessatille fayyida qaba.
Adipose tissuen adipocyte ofii kessa qaba, kuniis kan tajajilammu cushioning, thermal insulation, lubrication (bayyinaan pericardium kessattii) fi kuffama energy. [fat]
Dense connective tissue (yokan, yeroo tokko tokko, fibrous connective tissue kan jedhamu) ligaments fi tendons umma. Kunii immo collagen fibres bayee walitti qabame yoo ta'u, kunis jabenna tensile (gargari-ba'uu akka lastikii) gudda qaba.
Reticular connective tissue kuniin xaxamaa fibresii (fine collagen, gossa III) kana skeleton (waan akka lafee) lafaa umme, kan organii lymphoid (lymph nodes, bone marrow, fi spleen) qarqaru dha.
Specialized connective tissuesEdit
Dhigaa ademma nafa kessatti tajajilla. Kuttan isaa cell alla argamu blood plasma yoo ta'uu, kunis nyataa, hormone fi carbon dioxide makamee jiruu akkataa bicarbonaten ademma isaani qarqara. Kutaan dhigaa cell kessatti argamu red blood cell dha.
Lafeen kutta spinalii (spayinalii) dudaa kenyaa kessatti, skeleton bayee kessatti kan argamuu dha.
Cartilage kutta chondrichthyes kessatti, skeleton bayee kessatti kan argamu dha. Vertebrate birra kessatti, bayinaan joint kessatti argama, kunis cushioningiif tajajilla. Kutaan cartilage cell allat argamu bayinaan collagen ofii kessa qabu.
Embryonic connective tissuesEdit
Gossi fibersii kaneen:
Rakoo (disorders) connective tissueEdit
Rakoon connective tissue gargara bekkamanira; kunii immo kan dhalotaan dhufuu yokan kan environment (alla) dhufuu danda'u dha.
Marfan syndrome - dhukubaa genetic kana fibrillin sirii hin tanee fiduu dha.
Staining of connective tissueEdit
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Connective_tissue&oldid=37087" irraa kan fudhatame
Last edited on 12 Haggaya 2021, at 21:20
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 12 Haggaya 2021, sa'aa 21:20 irratti.